မီးတောင်တစ်လုံး ၀ုန်းကနဲ ပေါက်ကွဲသွားသလို
မီးကျည်းမီးခဲတွေ အရှိန်နဲ့ ပန်းထွက်လာသလို
အလျော်အစား ငွေကြေးနဲ့ စွန့်စားခန်းသရဖူမဟုတ်..
ဘ၀ချင်း အလဲအထပ် စစ်မြေ စစ်တလင်းသာဖြစ်တယ်.။
ညာသံပေးဂီတနဲ့ ယစ်မူးရှတ ရှန်ပိန်ညတွေမရှိ
အနီတွေ တ ရဲ ရဲ ပွင့် နေ ပြီ
အသံပါပူးတွဲခံစားလို့ရအောင် အသံထွက်တဲ့ ကဗျာအဖြစ်
နွားရိုင်း ဂီတ ကို ခံစားရွတ်ဆိုပေးခဲ့တဲ့
ရန်သူ့ဘက်က နိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး လက်ခုပ်သံ။ ဂရုဏာ။ သူရဲကောင်းဘွဲ့လက်မှတ်အားလုံးရရှိပြီး နွားရိုင်းအတွက်တော့ နိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး သားသတ်ရုံပဲရှိတဲ့ လူယဉ်ကျေးတွေရဲ့စိတ်အယားဖြေပွဲမှာ ကိုယ်က နွားရိုင်းဘက်က တဦးသောပရိသတ်
မီးတောင်တစ်လုံး ပေါက်ကွဲသွားသလို အရှိန်နဲ့
မီးကျည် မီးခဲ ပန်းထွက်လာသလို
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အသက်သွင်း ဆက်ခံခြင်း အနုပညာမဟုတ် ရန်ကြွေး
ဘ၀ချင်း အလဲအထပ် စစ်မြေ
သိက္ခာတရားက သူ့ချိုဖျားမှာ တည်နေတယ်။
နှလုံးသားကို ထုတ်ချင်းပေါက်အောင် အထပ်ထပ်အခါခါ တုန်ခါသွားစေခဲ့........
တိရိစ္ဆာန်တွေက သတ်ကွင်းထဲ မှာ မာယာမပါဘူး ရိုးသားတယ်
အမကြီးရေ အသက်ပြင်းပြင်းရှိုက်ပြီး ဖတ်သွားတယ်ဗျာ..
မရေ ... ကဗျာလေးကို အသံလေးနဲ့ အတူ ထပ်တူခံစားသွားပါတယ်နော်။ ကဗျာလေးရဲ့ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ မာန်တွေဟာ အသံနဲ့အတူ နားထောင်လိုက်မှ ပိုပြီးတက်ကြွ လာတယ်။
သူ့မှာ ဘာဆို ... ဘာမှ ... မရှိ ပေမယ့် သူရဲ့ သိက္ခာတရားက သူ့ချိုဖျားမှာ ရှိ်နေတယ်တဲ့။ ဒီတော့ သူ့အတွက် လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားမလား? ဒါမှ မဟုတ် အရှုံးပေးမလား?
နွားရိုင်းဘက်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဟော့ဒီ ကွင်းပြင်စိမ်းပေါ်ကို မျက်တောင်မခတ် စိုက်ကြည့်ရင်း ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်...။
နွားရိုင်းတကောင်ရဲ့ ဦးချိူပေါ် ကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်.
ကဗျာနဲ့ အသံကို ခံစားလိုက်တာ ကိုယ်တိုင် ကွင်းထဲ ရောက်သွားသလိုပါပဲ.....
အသံထွက် ရွတ်ဆိုခွင့် ရလိုက်လို့..
(ကိုယ်တိုင် ခတ်ခွင့် ရလိုက်လို့)
ရင်ထဲ အသေအချာ ရိုက်သွင်းဝင်ရောက်သွားတဲ့
အမှတ်တရ ကဗျာလေးအဖြစ် အသေအချာ သိမ်းထားမယ်..။
အနီတွေ တ ရဲ ရဲ ပွင့် နေ ပြီ
စီးနင်း ကျူးကျော်သမျှ အားလုံး
အပြီးသတ် ခါချ ပစ်လိုက်ဖို့
သူ့ သိက္ခာ တရားက..
သူ့ ချိုဖျားမှာ တည်နေတယ်
သူ့ ချိုဖျားမှာ တည်နေတယ်....
ကျနော် ပြန်လာဖြစ်ရင် ဆုံကြဦးမယ်..။
တစ်ဘဝလုံးစာ သိက္ခာ တရားဟာ
နွားရိုင်းတစ်ကောင်ရဲ့ ချိုဖျားမှာ ...။
အသက်နဲ့ ထပ်ထား ခဲ့ပါတယ် ..။
ဂီ ... တ ...။
ဂုဏ်သိက္ခာတရား ရဲ့ ဘာသာစကားကို နွားရိုင်းရဲ့ ချိုဖျားက စီးကျလာတဲ့ ဂီတသံက ပြောပြနေတယ်။
ကဗျာလေး ရေးထားတာ အရမ်းကို လေးနက်တယ် အမရေ..
အသံထွက်ပါ နားထောင်လိုက်ရတော့ အရမ်းကို ပြည့်စုံပြီး အဓိပ္ပါကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်..
ကဗျာက အဓိပ္ပါယ်ရှိသလို ရေရွတ်သူရဲ့ အသံအနှိမ့်အမြင့် မာန်ပါမှုတွေကြောင့်.. ပိုပြီးလေးနက်သွားပါတယ်..
စိတ်ထဲမှာ စပိန်နွားရိုင်းသတ်ကွင်းထဲ ရောက်သွားတယ်..။
ဖတ်ရင်း နားထောင်ရင်း တစ်လောကလုံးကို စိတ်နဲ့ ခွေ့ပစ်လိုက်တယ်..။
လောကမှာ မာယာနည်းသူတချို့ဟာ နွားရိုင်းတွေပမာ...။
ကဗျာရော အသံရှင်ကြီးကိုပါ ဖီးလ်အပြည့်နဲ့ ခံစားသွားပါတယ်။
ကိုရင်ဒီကဗျာကိုရွတ်တုန်းက ကဗျာရဲ့ပါဝါတွေ သိပ်ပြင်းထန်လို့ သူတောင် ကရားတေးကီထိုင်သလို ထိုင်ပြီး အသံသွင်းခဲ့ရတယ်လို့ ပြောတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အမလည်းအဲသလို ကီထိုင်ပြီးများရေးခဲ့သလားထင်လို့ ကျနော်ကလည်း ဖီးလ်အပြည့်နဲ့ ခံစားနားဆင်သွားတာပါဗျာ ဟဲ ဟဲ။
မှတ်ချက်။ ။ကဗျာရေးရင် သက်တောင့်သက်သာရေးပါ။ :D
ဒီအသံက ဦးနော် အသံလား အမ။
:) အဆင်ပြေပါစေ ကဗျာဆရာမရေ
ဘဝက ညင်သာနူးညံ့တဲ့ မုန်တိုင်းတစ်ပုဒ်လို